61 guurada aas-aaska ciidanka xoogga dalka Soomaaliya oo maanta ku beegan | Star FM
Home Wararka Soomaaliya 61 guurada aas-aaska ciidanka xoogga dalka Soomaaliya oo maanta ku beegan
61 guurada aas-aaska ciidanka xoogga dalka Soomaaliya oo maanta ku beegan
Maanta ayaa waxaay ku beegan tahay sanad-guuradii 61aad ee Aas-Aaskii Ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo la dhisay 12 bishii Afaraad ee Sanadkii 1960-kii, iyadoo sanadkii labaad aan loo qaban munaasabad loogu dabaal-degayo Maalinka Ciidanka Xoogga dalk.
Taliyaha Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliyeed Sareeyo guuto Odawaa Yuusuf Raage ayaa Ciidanka Xoogga Dalka ugu hambalyeyay Sanadguurooda 61-aad oo ku beegan Maanta oo taarikhdu tahay 12 April 2021-ka.
Taliyaha Ciidanka Xooga dalka ayaa guud ahaan Ciidanka Xoogga dalka ugu hambalyeey munaasabada qiimaha badan ee aas aaskooda oo sanada jirsaday 61-sano .
General Odowaa Yuusuf Raage ayaa saraakiisha ,saraakiil xigeenada ,Dableyda, Alif leyda iyo waliba qoysaskooda hambayo ugu diray dabaal degi sanad guurada Ciidanka Xoogga dalka iyo sidoo kale guud ahaan shacabka Soomaaliyeed.
Previous articleGuddiga JSC oo maanta su’aalo weydiin doono shakhsiyaad soo codsaday jagada madaxa cadaaladda
Next articleDHAGEYSO:Ra’iisul wasaare Rooble oo laamaha amniga kala shiray sugidda amaanka Ramadaanka